China Gratour V5 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Foton
Ihe niile dị n'okpuru njikwa
Typedị ahụ 1640
Dị Mmanụ Petrol
N'ime Nha 2300 * 1450 * 1280
• sitere na echiche okike nke Europe, nhazi usoro na ọdịdị nke na-egosipụta echiche nke nchekwa • facekpụzi ihu ihu pụrụ iche, na-enyere aka kwụsie ike ma nwee obi ụtọ.
Ndị Foton mepụtara ndị ọzọ
Pịnye Njirimara: 16V + DOHC + MPFI
Bọra (mm): 69.7
Ogbugbu (mm): 79
Mgbapụ (L): 1.206
Agba 3 nke nyocha ike na mgbanwe CAE, na-ekwenye na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya nke akụkụ chassis dị oke egwu; ule niile nke ikwado ntụkwasị obi na mmeghari ihe, na-enyere mmadụ niile aka ịdịgide ndụ afọ 10 ma ọ bụ 200,000 kilomita
Kachasị ahụ ekike
8-obe onye otu imewe, na-enyere nke kacha mma mmetụta na-eguzogide Tụnyere nkịtị Obere-ụgbọ ala, etiti cross-sectional akụkụ mụbara site 10%, ígwè mpempe akwụkwọ ọkpụrụkpụ mụbara site 20%; 58% nke etiti emere nke ígwè siri ike.
N'azụ drum breeki, huu max braking maka
Na-akwọ ụgbọala ebe ọrụ azụmahịa ogige imewe, ala ịkpụzi. Boardkwụ na-enyere gị aka site na taya njem.
Mpempe akwụkwọ ime ụlọ nke abụọ, na-egosipụta mmetụta dị mma nke ụgbọ ala ndị njem. Ebe nchekwa 13, na-eduga na ngwaahịa ndị yiri ya.